Idzi ndidzo nhau dzakatanhamara dzewatchOS 5 | Ndinobva mac
Nezuro masikati Apple yakaburitsa yazvino vhezheni ye watchOS inowanikwa yemhando dzose dzeApple Watch kusara kweSystem 0. Yekutanga eema smartwatches akatangwa neApple anosara kunze mushure memakore ese aya achigara achigadziridzwa.
Zvinotaridza kuti kuvhurwa kweshanduro nyowani yeOS kunouya kwakafukidzwa nekutanga kukuru kweIOS 12, asi iyo Apple Watch ichiri chinhu chakakosha cheApple nevashandisi vayo, saka nhau dzakakosha uye dzinonakidza. mawatchOS 5 anosvika akatakurwa nenhau ndosaka tichida kurongedza akatanhamara.
1 Yakagadziriswa Kudzidziswa Dhata
2 Mabasa ari nani uye kuwiriranisa
Yakagadziriswa Kudzidziswa Dhata
Uyo anokunda pavhiki. Zvino zvakare Nekugovana chiitiko chako, unogona kukwikwidza shamwari kumakwikwi emazuva manomwe: inoumbwa nekuwana mapoinzi zvinoenderana nepesenti yezviridzwa zveIzviitiko zvaunokwanisa kuvhara. Kukwikwidza kune hutano hakuna kumbove kwakasimba kudaro.
Mudzidzisi akasarudzika. Munguva yemakwikwi, yambiro inokuudza kana uri kuenda kumberi kana kumashure, pamwe nezvibodzwa. Nenzira iyi iwe unozonyatso ziva kuti yakawanda sei nzimbe iwe yaunofanira kuzvipa iwe kuti utore.
Otomatiki kudzidziswa kuona. Apple Watch inoona akawanda marudzi ekurovedza kana iwe uchifamba uye zvinokukurudzira kuti uvhure iyo Chitima app. Izvo zvinotofunga nezve kurovedza muviri iwe watoita kare. Zvakare, zvinokuyeuchidza iwe kuti uvhare iyo yekurovedza muviri kana ukaipotsa iwe paunenge uchipora.
Mabasa ari nani uye kuwiriranisa
Walkie-talkie achitaura. Chinja. Nzira nyowani uye yakapusa yekuita hurukuro nechero munhu ane Apple inoenderana inoenderana. Kana iwe uchitsvaga mumwe munhu pamutambo kana pamhenderekedzo kusvika pamuromo, iwe unofanirwa kungo tepa uye kutanga kutaura.
Otomatiki yaunonyanya kushandisa. Nguva dzose wakagadzirira.Zvikamu zvinotevera zvepodcast yako zvichave zvakagadzirira nguva iwe yaunoda kuzviteerera. Zvakare, unogona kukumbira Siri kuti akuwane uye utambe chero Apple Podcasts show.
Iyo Siri yekuona kumeso inoshandisa muchina kudzidza. Sezvo paanosvika pakuziva iwe, Siri anopa mazano ari nani ezvinyorwa zvinogona kukufadza, uye anokupa mapfupi ekuti uite zvinhu paunenge uchinyanya kuzvida. Wakabva kubasa here? Yako «Homecoming Playlist» yakamirira iwe pachiuno chako.
Mamwe akakosha mapoinzi eichi chiitiko chinoenderana nekuvandudzwa kwezviziviso izvo zvino zvanyanya kufanana neIOS 12, iyo sarudzo yekuwedzera nzira pfupi kuburikidza neiyo Workflow app (Mapfupi) paawa iyo inovandudza Siri zvakanyanya kana kuronga sarudzo «Usadaro kukanganisa »kwechimwe nguva kana tichida. Chero zvazvingaitika, ruoko rwakanaka rwekuvandudza kwatinokuraira kuti ugadzirise nekukurumidza sezvazvinogona. Kune izvi isu tinofanirwa kuwana iyo application Tarisa> General> Software Kwidziridza, tinotora nekuisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Izvi ndizvo zvakakosha zvewatchOS 5
Aya ndiwo akakosha eTVOS 12
Rongedza magwaro ako uine anopfuura zviuru zviviri zvemifananidzo yakasiyana ye2.000 euro chete